Vhidhiyo: Yemagariro maringe neKutsvaga Smackdown | Martech Zone
Vhidhiyo: Yemagariro maringe neKutsvaga Smackdown
Chipiri, Gunyana 10, 2013 Chipiri, Gunyana 10, 2013 Douglas Karr
Ndofunga MDG Kushambadzira anga achiedza kuti vamwe vedu vakande gasket patinoverenga zita reiyo infographic vhidhiyo yavakaisa pamwechete, Zvemagariro vs Kutsvaga Kupunzika: Hondo yeInternet Kushambadzira Titans. Asi, maiwe, vanouya kupfungwa dzavo pakupera kwevhidhiyo.
Patakatanga yedu agency, iyo indasitiri yakanga yakazara nehunyanzvi vamiriri. Muchokwadi, chidimbu chekutanga chezano chandakagamuchira kubva kumuridzi wesangano kwaive kuita hunyanzvi. Izvo zvaipesana zvakananga nechikonzero chaicho chandatanga Highbridge - yaive nekuti munhu wese airwa nebhajeti yemumwe uye hapana aitsvaga mutengi. CMO yakapihwa yaisimudza mafoni kubva kune vatengesi veEndaneti, vatengesi veSEO, maSocial Media vatengesi… tisingataure vatengesi vechinyakare vekutengesa. Uye vese vakaunza matanho patafura kutsigira nei uchifanira kushandisa yakawanda navo.
Maitiro ekushambadzira edhijitari anoshanda zvakanyanya haasi ne, vese vanofanirwa kushanda pamwechete. Email vanogamuchira vanodzoka uye vanoita zvemagariro, pasocial media inogadzira hurukuro online iyo inogadzira zvinyorwa uye backlinks, izvo zvinozovandudza chinzvimbo chako. Ipapo chinzvimbo chako pamashoko akakodzera anosvika pamberi pevanhu vari kutsvaga uye vakagadzirira kutenga. Mubvunzo hausi iwo waunofanira kushandisa, asi maitiro aunofanira kutarisa nekushandisa imwe neimwe.
Iwe wakada kunditora MDG! Basa rakanaka.
Tags: mdgmdg kushambadzamdgkushambadzaTsvaga Kutengesatsvaga maringe nemagarirokushambadzira kwevanhuSocial Media Marketing
Chakavanzika Art cheDhijitari Kushambadzira
Sep 11, 2013 pa 4: 30 AM
Seye pseudo SEO / SEM yekutanga boutique femu, ini ndingade kukwirisa ese ari maviri. Zvemagariro neKutsvaga zvakatenderedza, saka ndinobvuma kuti ivo vanofanirwa kuenda vakabatana kugadzira yakanaka yekutsvaga yekutsvaga nzira.